FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA FOHY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika fohy
Olon-dehibe, lahy Shorty Bull, sary natolotry ny Precious Jems Kennel
Omby omby SHAWR-tee
Ny Shorty Bull dia bulldog matevina sy hozatra manana halehibe kely. Ny lohany dia boribory misy endrika mahazatra bulldog. Napetraka lavitra ny maso ary tsy tokony hipoitra. Tokony hiondrika ny valanoranony fa tsy mahitsy. Ny orona dia tokony avadika kely ary mety mainty na miloko aty. Ny orona Dudley dia lesoka amin'ny tarehy. Tokony hanana manaikitra ambany, fa tsy sary ambany loatra. Mety misy loko ny maso, na dia volontsôkôlà aza ny lokon'ny masonao. Voakapa na milatsaka ny sofina. Ny sofina mitsangana na manangana dia heverina ho lesoka. Ny vatana dia tokony ho fohy avy any aorian'ny tendany mankany amin'ny rambony. Ny tratra dia tokony ho malalaka amin'ny haavony ary hahatratra hatramin'ny kiho ny halaliny. Fanehoana kely no tadiavina. Ny sakan'ny efi-trano aloha sy ny avaratra dia tokony hitovy refy, tsy hampindrana amin'ny aoriana tery, ary ny tratra dia mety ho lehibe kokoa noho ny aoriana. Ny sisintany farany tery dia heverina ho lesoka. Ny soroka sy ny rof dia tokony ho boribory tsara sy hozatra tsara, mampindrana ny fisehoan'ny tanjaka. Mety misy fiakarana kely eo amin'ny andilanana. Ny tongony dia mavesatra volo ary mifanaraka tsara amin'ny vatana. Ny tongotra lava mifanentana amin'ny vatana na taolana tsara dia diso. Ny vodin'omby na ny voromailala dia lesoka. Ny alika dia tokony hanana tongotra tery sy pasterns mahitsy. Ny tongotra milalao dia kilema. Fohy ny rambony, na tratra na visy. Ny loko palitao rehetra ekena afa-tsy merle na mainty sy mainty.
Ny Shorty Bull dia alika tsara toetra, mahonon-tena, milamina. Mila fitarihana ity karazany ity ary tsy hiroborobo raha tsy misy an'io. Rehefa mahatsapa an ny tompony dia malemy fanahy na mandefitra mankany aminy, dia ho lasa fanahy iniana. Ireo alika ireo dia mamaly tsara indrindra amin'ny tompona milamina, nefa hentitra, tsy miova ary manam-paharetana. Anarana serasera olombelona amin'ny canine tena ilaina. Tena vonona ny hampifaly. Manao namana tsara ary vonona sy vonona ny hiasa.
Haavony: 15 santimetatra (38 cm) sy ambany.
Milanja: 18 kilao (18 kg) sy ambany.
chihuahua afangaro mainty sy fotsy
Ny Shorty Bull dia miaina tsara indrindra ao an-trano akaikin'ny fianakaviany.
Ny Shorty Bull mailaka sy atletika kokoa noho ny English Bulldog. Mila entina mandehandeha lava isan'andro amin'ny misy azy io fikorontanana eo akaikin'ny na aorin'ilay olona mitarika , toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona.
10-12 taona eo ho eo
Alika kely eo amin'ny 3-5 eo ho eo
Kely dia kely ny filan-tarehy. Ny fanaovana borosy tsy tapaka dia mety. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
rhodesian ridgeback sy mpiandry ondry mifangaro
Ireo mpanorina ny Shorty Bull dia Jamie Sweet sy Amy Krogman. Ny Shorty Bull dia andiana bulldog vaovao izay zahana amin'ny haben'ny kely indrindra. Tsy toy ny karazam-borona hafa mampitombo ny habeny, ny Shorty Bulldog dia tsy ahitana an'i Boston Terrier na Pug amin'ny andalana. Ireo alika ireo dia nobeazina noho ny fahaizany miasa sy ny toetra ara-batana fa tsy amin'ny endrika ivelany fotsiny.
BBCR = Registre Coalition iraisana
Olon-dehibe, Shorty Bull vehivavy, sary natolotry ny Precious Jems Kennel
lisitry ny alika alika abidia
Shorty Bull pup amin'ny faha-6 volana, sary natolotr'i Precious Jems Kennel
lava volo lava chihuahua dachshund mifangaro
sary mifangaro boxer sy pitbull
border collie mavo mix mix
King charles cavalier ruby ​​alika kely
maninona ny alikako manana orona mavokely